Ratsiraka Didier Ignace : Dia ho mpitari-bato vilam-bava ve? - rov@higa
Ratsiraka Didier Ignace : Dia ho mpitari-bato vilam-bava ve?
24 Novembre 2011, 21:51pm
Publié par Collectif GTT
Ratsiraka Didier Ignace : Dia ho mpitari-bato vilam-bava ve? (+vidéo)
Tamin’ny mitataovovonana no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny fianakaviany. Nandritran’ny tafa nataony tamin’ny mpanao gazety no nanambarany fa “hanolo-tanana ny vahoaka Malagasy ny tenany amin’ny famahana ny krizy”. Nanterin’ity filoham-pirenena teo aloha ity anefa fa “tsy maintsy eto an-drenivohitra no hanaovana ny loabary an-dasy ary atrehin’ny lehiben’ny ankolafy politika sy ny vondrona manana ny maha-izy azy rehetra. Alefa mivantana amin’ny haino amanjerim-pirenena izany ary ny vahoaka Malagasy no hitsara ny mpandray anjara tsirairay”.
Sary fahatongavan'ny amiraly
Manomboka eto izany dia mandalo fitsarana amin’ny vahoaka Malagasy ny Amiraly satria tsy afaka mihanona amin’ny fanaovana kobaka am-bava intsony fa mila asa sy porofo mivaingana azo tsapain-tanana. Marina fa azo lazaina santatry ny fiverenan’ny sesitany politika izao fahatongavan’ny amiraly izao saingy tsy afaka atao loatra ny hahatoky anjambany olona izay nahatonga ny krizy teto amin’ny firenena. Ahiana mantsy mety hivadika ho zavatra hafa indray ny fiteniny atsy ho atsy rehefa tsoloran’I tgv sy ny forongony vola sy fiadanam-be eo ny tenany.
"Ny toky fitaka fa ny atao ro hita ..."
Jean Louis Rakotoamboa : miantso ny firaisan-kinan’ny Filoha telo mirahalahy (+vidéo)
Raha ny fijery ivelany dia mitombo hery ankehitriny ny ankolafy telo satria ny roa amin’ireo mpitarika azy no efa eto an-toerana. Ankosoka ihany anefa izany raha toa ka tsy mitovy ny tanjona amin’ny famahana ny krizy satria hiteraka fivakisana avy hatrany ka vao maika hihaosa ny fiarahana. Manoloana izany indrindra dia nanao antso avo amin’izy telo mirahalahy lehiben’Ankolafy ny Filoha Nasionalin’ny anotko TEZA Jean Louis Rakotoamboa. Tsy hahasoa ny tolom-bahoaka izany, arakin’ny fijeriny, satria hanome vahana ny asa ratsy efa nokotrehin’ny mpanjanaka dia ny fampizarazarana ny samy Malagasy indrindra ny mpitaky ny fiverenan’ny ara-dalàna. Napetrany tamin’ny Pr. Zafy Albert manokana izany hafatra izany nandritran’ny fandalovany teny amin’ny kianjan’ny Finoana Magro Behoririka.